Kuthonya Nokuzenzakalela | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 9, i-2006 NgoMgqibelo, Ephreli 16, 2016 Douglas Karr
Kuthakazelwe isahluko ku- Izingxoxo Ezinqunu, Nginqume ukuphinda ngisebenzise ibhulogi yami namuhla. Ngangivele ngiyibize ngoDouglas A. Karr, ukumaketha kwedijithali kanye nedatha. Lokho empeleni akusho okuningi ngokuthi ngingubani nokuthi yini ebengizama ukuyifeza nge-blog yami, noma kunjalo. Ngabe othile uthayiphe Umondli 'ukumaketha okuzenzekelayo', ngiyaqiniseka ukuthi ngabe angikho lapho ohlwini - yize kuyisifiso sami.
Ngizamile ukusebenzisa umusho owodwa wokubamba kepha angitholanga. Ngemuva kweziqubu ezinde ze- ithesorasi futhi isichazamazwi ngibheka, nginqume ukuthi kunemigomo emi-2 efingqe ngempela… ithonya nokuzenzakalela. Inkolelo yami ukuthi ukumaketha okusebenzayo kwehlela kule migomo emi-2. Amandla wokuthengisa ngempumelelo kufanele abe nomthelela kothile ekuthengeni umkhiqizo noma insizakalo oyithengisayo. Ukuzenzakalela kuyindlela yokuqhubeka nenqubo kuzo zonke izigaba kuze kuphele.
Ngemuva kokusebenza namaphephandaba, i-imeyili eqondile, omagazini, ukuthengisa ngocingo, iwebhu, ibhulogi kanye nezinhlelo zokumaketha nge-imeyili, bekulokhu kungokugcina ingxoxo nalo muntu. Phusha isikhangiso phambi kwabo bese ukhohlwa ngabo, futhi unciphisa amathuba akho okuvala ukuthengisa. Udinga ukuphikelela, kepha hlonipha izidingo zomuntu noma izifiso zakhe.
Eminyakeni engamashumi amabili edlule, isikhathi esifushane ngaphambi kokuba ngijoyine uMbutho Wezempi, ngangisebenza kwa-Home Depot. Kwakungumsebenzi onzima. Ngangingu 'mfana omningi', ngilayisha izimoto zamakhasimende namaloli ePhoenix, e-Arizona. Kepha angisoze ngasikhohlwa isifundo sami sokuqala kwezokuMaketha lapho. Abaphathi bakhuthaze bonke abasebenzi ukuthi babuze amakhasimende ukuthi iyiphi iphrojekthi abasebenza kuyo. Lokhu kwehlukile kunokubuza ukuthi, "Ngingakusiza?". Kulokho, impendulo elula ingaba "Cha". Kodwa-ke, lapho bebuzwa ukuthi iyiphi iphrojekthi abasebenza kuyo, amakhasimende amaningi aqala ingxoxo enkulu nabasebenzi ngalokho abazama ukukufeza. Lokhu kuholele kumakhasimende ajabule kakhulu nasekuthengisweni okuvalekile.
Ngama-mediums afana newebhu, kusengxoxo esizama ukuqala ngayo namakhasimende ethu. Ukubeka iwebhusayithi laphaya nemifanekiso ethile epholile kufana nokuba nophawu oluhle ngaphandle kwesitolo sakho. Kepha akusoze kwathatha indawo yokuxhawulana okuhle nokubingelela.
Izinhlobo zokukhangisa ezingenayo zisaqhubeka. Namathisela izikhangiso kuyo yonke indawo futhi othile angabona eyodwa futhi athenge okuthile. Kodwa-ke, i-intanethi iletha izindlela ezinhle zokuxoxa namathemba akho namakhasimende. Ama-Blogs, i-RSS, i-imeyili, amafomu, izinkundla zewebhu, kanye nosesho konke kuyimizamo yokuthengisa ematanisayo. Lapho ukwazi ukubopha futhi wenze lokhu kube yimizamo yakho yokumaketha, izingxoxo phakathi kwakho namathemba akho ziba ngcono, futhi ibhizinisi lakho liyothuthuka kangcono.
Konke kumayelana nethonya nokuzenzekelayo. Ngiyethemba uyasithanda isihloko esisha!
Tags: ezishintshayodouglas karrithonyaekuthonyeni nasekwenzeni udumorobert scobleIgobolondo lakwa-Israyeli
Ama-Drones Wokumaketha Angenamuntu